Kangton - Sina Kangton Varavarana Fiberglass tsara kalitao avy amin'ny orinasa mpamatsy China KDF03D-G sy mpamokatra | Kangton
Kangton Door Fiberglass tsara kalitao avy amin'ny mpamatsy China KDF03D-G
Haavony: 78 ", 80", 82 ", 84", 86 ", 96"
Sakany: 24 ", 26", 28 ", 30", 34 ", 36"
Ny varavarana fidirana Kangaron fiberglass dia manasongadina ny hatsarana sy ny hakanton'ny hazo, saingy tsy mila fikojakojana firy ary manana androm-piainana lava kokoa. Natolotra amina karazana voam-bary maro karazana, ny varavarantsika dia tsy mila fikojakojana, manome tolotra lava kokoa, ary mahomby kokoa noho ny angovo noho ny varavarana fidirana hazo na vy mahazatra.
hahavony 2050mm, 2100mm
sakany 45 ~ 105 cm
hateviny 45 mm
Panel Fiberglass Doorskin miaraka amina primer / lacquer famaranana
Rail & Stile Hazo kesika matevina
Famaranana ny habakabaka UV lacquer, borosy, tsy vita vita
Fomba Volavola bobongolo, tontonana 1, tontonana 2, tontonana 3, tontonana 6
Fiberglass sy varavarana fidirana vy
Ny tompon-trano sy ny mpifaninana mividy kalitao, mividy varavarana fidirana. iSIKA manolotra vavahady fidirana an-dakilasy sy vy ho an'ny sokajy matihanina efatra izay mahafeno ny fenitra avo indrindra amin'ny hatsaran-tarehy, faharetana, fiarovana ary fahombiazan'ny angovo, azo raisina amin'ny habe sy ny famaranana. Amboary ny varavaranao ivelany amin'ny fomba tianao hampiasana anays.
Ny vavahady ivelany misy ny fiberglass vaovao dia manosika ny valopy amin'ny fahombiazan'ny angovo, miaraka amin'ny varavarana mahomby indrindra azo alaina ao Etazonia. Fir sy Oak, ary loko miloko fito isaky ny andiany. Ny vavahady fiberglass an'ny lovantsika dia manolotra ny fomban'ny hazo tena izy miaraka amin'ny faharetana sy fiarovana ny fiberglass. Ary, ny varavarana ivelany misy anay vy miaraka amin'ny vy 20-gauge dia manome fiarovana tsy manam-paharoa.
Mianara bebe kokoa momba ny fomba hisafidianana ny varavarana fidirana tsara indrindra ho an'ny tranonao:
1. Ahoana no ahafahan'ny fomban'ny tranonao manampy amin'ny famaritana ny safidinao amin'ny fidirana
2. Varavarana vy vs. fiberglass varavarana ivelany? Inona no mahasamihafa azy
3. Fitaovana sy safidy fitaratra ho an'ny varavarana tokana sy frantsay
4. Fanavaozana izay mahatonga ny varavarana fidirana ProVia ho safidy tsara indrindra
5. Maninona ny varavarana fidirana manokana no mety ho safidinao tsara indrindra
6. Ahoana no hanatsarana ny loko na tasy ampiasain'ny orinasa amin'ny kalitao sy ny halavan'ny fiafaran'ny varavaranao
7. Ahoana ny fomba hanampian'ny varavarana ivelany sy ny varavarankely Energy fiarovana ny tontolo iainantsika
8. Ahoana no ahafahan'ny varavarana fidirana vaovao manampy anao mivarotra ny tranonao
Teo aloha: Door Wiberglass Wapterproof miaraka amin'ny Panel Glass Glass KDF01G
Manaraka: Fivarotana mafana fidirana Fiberglass ho an'ny tsena US / Canada KDF05G
Door Wiberglass Wapterproof miaraka amin'ny valiha fitaratra iray ...
Shaker Design Solid Core Inetrior Wooden varavarana w ...
Fivarotana tsara indrindra Shaker Hollow Core HDF bobongolo Doo ...
Varavaran-kazo mafy orina Pivot hazo misy fitaratra KD40A-G